‘ममात्रै महामन्त्रीको योग्य छु भन्ने होइन’ | Ratopati
‘दुर्गाजीले हार्दा भएन, जित्दा चाहिँ विवाद भयो’
personबबिता शर्मा exploreकाठमाडौं access_timeअसार २०, २०७६ chat_bubble_outline0
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहँदै आउनुभएका नेकपा मसालका महामहामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसँग समसामयिक विषयहरुमा रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढेको छ भनेर बारम्बार आरोप लगाउँदै आएको छ । तपाईको पार्टीले सरकारका गतिविधिलाई कसरी नियालेको छ ? के सरकार काँग्रेसले भनेजस्तै अधिनायकवादको बाटोमा हिँडेकै हो त ?
पहिलो कुरा– जसले वर्तमान सरकारमाथि अधिनायकवादको बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन्, त्यो आरोप लगाउने उनीहरुलाई अधिकारनै छैन । किनभने हामीलाई थाहा छ, शेरबहादुर देउवा हुँदा उनले कति पटक पुरै अधिनायवादी शासन कायम गरे । अहिले उनलाई त्यो भन्ने अधिकार पनि छैन । तर कैयौँ पटक कम्युनिष्ट आफ्नो पदीय अधिकारलाई दलिय अथवा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न थाल्दा कम्युनिष्टहरु विग्रेका पनि छन् ।
हामीले भनिराखेका छौँ, अहिले ओली सरकारले जुन प्रकारको नीति अपनाई राखेका छन्, त्यो नीतिले देशलाई अधिनायवादतिर लैजान्छ । त्यसकारण त्यो गलत नीतिको हामीविरोध गर्छौं ।
कमसेकम देशमा यतिखेर बुर्जुवा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र कायम भएको छ । प्रेश स्वतन्त्रता कायम भएको छ, त्यसलाई बचाउनु पर्छ । तर ओली सरकारले त्यसका विपरीत कामहरु गर्दै गइरहेका छन् । उदाहरणको लागि, जसरी मिडिया काउन्सिलको विधेयक ल्याए, त्यो गलत थियो । यसलाई हामीले बिरोध गर्यौँ । विधेयकहरु ल्याउँदा सम्बन्धित सवैपक्षसँग सल्लाह गरेर ल्याउनु पर्दथ्यो । विकास सम्बन्धि बजेटहरु प्रजातान्त्रिक, जनवादी तरिकाले खर्च गरिराखेका छैनन् । खर्च आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत गर्ने गरिरहेका छन् । यो तरिकालाई हामी राम्रो मान्दैनौँ ।
यद्यपि, उनीहरुले चाहँदैमा अधिनायकवाद त उनीहरुले कायम गर्न सक्दैनन् । रुसमा त्यही भयो नि । रुसमा कम्युनिष्ट शासनको नाममा, सर्वहारा वर्गको नाममा आफ्नो अधिनायकत्व कायम गरे । त्यसले जनतामा वितृष्णा पैदा भयो र पूँजीवाद आयो । कयौँ ठाउँमा जनताको बिरोध सहि रुपमा प्रकट हुन पाउँदैन, त्यसले तानाशाहीको रुप लिन्छ । जर्मनीमा नै हेराँै । त्यहाँको बुर्जुवा शासनको गलत तरिका थियो । त्यसप्रति व्यापक असन्तुष्टि थियो । क्रान्तिकारी दिशा लिन सकेन, त्यसपछि हिटलर आयो । कैयौँ पटक प्रतिगामी शासन किन आउँछन् भने प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु वा वामपन्थी शक्तिहरुले सही काम नगर्दा त्यसबाट पैदा भएको असन्तुष्टिबाट उनीहरुले फाइदा उठाउँछन् । जस्तो बहुदलीय व्यवस्थामा ०४६ सालपछि पार्टीहरुले राम्रो काम गर्न सकेनन् र ज्ञानेन्द्र आए । विपीले राम्रो काम गर्न सकेनन्, महेन्द्र आए । त्यसकारण कम्युनिष्टहरुले देशलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा खत्तम भएर गएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । त्यसकारण, विरोधीलाई दोष दिएर मात्रै पुग्दैन । कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार काम नगर्दा विश्वबाट समाजवाद नैै धरासयी भएर गयो । यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
तपाईहरुले केहीसमय पहिला विभिन्न पार्टीहरुसँग कार्यगत एकता पनि गर्नुभएको थियो । अहिले तपाइको पार्टीका गतिविधि पनि केही देखिदैँनन् । तपाईंहरुको राजनीतिक एजेण्डा मुद्दाहरु मुखरित भइरहेका छ्रैनन् ? तपाईहरु कहाँ अलमलिनु भयो ?
राजनीतिक मुद्दामा हामी अलमलिएका छैनाँै, हाम्रो धारणा स्पष्ट छ । भर्खरै सम्पन्न हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले परित गरेको प्रतिवेदन बाहिर आएको छैन । हामीले राष्ट्रियताको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, राजनीतिक पार्टीको पक्षमा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, त्यो बारम्बार बाहिर ल्याएका छाँै । समस्या के हो भने ती प्रश्नहरुमा जति ठूलो आन्दोलन उठाइनुपथ्र्यो, त्यति हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ । त्यसको लागि हामीसँग पर्याप्त शक्ति, साधन हामीसँग छैन ।
विप्लवहरुसँग कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति थियो । तर उनीहरु ठाउँ ठाउँमा हाम्रै साथीहरुलाई धम्काउने, हाम्रा गाउँपालिका प्रमुख भएकामा राजीनामा दिन लगाउने, कारवाही गर्ने लगायतका गतिविधिहरुले कार्यगत एकता हुन सकेन । बीचमा पार्टी एकताको कुरा पनि चलेको थियो । तर उनीहरुको कार्यशैली र हाम्रो कार्यशैलीमा काफी भिन्नता रह्यो । उनीहरुको आतंकवादी प्रकारको कारबाही छ, त्यसमा हाम्रो मेल खाएन र पार्टी एकता हुन सकेन, कार्यगत एकता पनि हुन सकेन ।
यसअघि तपाईंहरुको पार्टी समेत विभिन्न वामघटकहरुबीच कार्यगत एकताको कुरा निक्कै उठेको थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ?
कार्यगत एकताको सन्दर्भमा अलि पहिला १७ वटा पार्टीसँग कार्यगत एकता गरेका थियौँ । पछि त्यो कार्यगत एकता टुट्यो । ति सवै मोहनवैद्यहरुसँग मिल्न गए । आखिर तिनिहरु पनि छिन्न भिन्न भए । पछि वैद्य, विप्लवहरुसँग कार्यगत एकता गर्यौँ । त्यो पनि लामो समयसम्म टिकेन । विप्लवहरुसँग कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति थियो । तर उनीहरु ठाउँ ठाउँमा हाम्रै साथीहरुलाई धम्काउने, हाम्रा गाउँपालिका प्रमुख भएकामा राजीनामा दिन लगाउने, कारवाही गर्ने लगायतका गतिविधिहरुले कार्यगत एकता हुन सकेन ।
बीचमा पार्टी एकताको कुरा पनि चलेको थियो । तर उनीहरुको कार्यशैली र हाम्रो कार्यशैलीमा काफी भिन्नता रह्यो । उनीहरुको आतंकवादी प्रकारको कारबाही छ, त्यसमा हाम्रो मेल खाएन र पार्टी एकता हुन सकेन, कार्यगत एकता पनि हुन सकेन । बीचबीचमा हामीले कार्यगत एकताका लागि कुरा गरेका छौँ तर यो त्यति सफल हुन देखिन्न । संक्षेपमा भन्दा कार्यगत एकता, पार्टी एकता गर्नका लागि मिल्ने पर्याप्त शक्तिहरु पनि छैनन् ।
३१ः४० छरिएर रहेका वामपन्थी पार्टीहरुबीचमा निकट भविष्यमा पार्टी एकता हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन त ?
एकताको निरपेक्ष कुरा होइन । एकसाल पहिले तपाईंले तत्कालीन माओवादी र एमालेबीचको नेकपाको पार्टी एकता देख्नु भयो । उनीहरुको त्यो एकता सिद्धान्त वा राजनीतिमाथि आधारित थिएन । त्यसबेला दुबैलाई कार्यगत एकता गरेनौं वा मिलनौं भने चुनावमा हामी हार्छौं भन्ने थियो । त्यो आवश्यकताअनुसार सिद्धान्त र राजनीतिक प्रश्नलाई गौण बनाएर गरिएको एकता भएको कारण एकताको एक बर्ष वितिसक्दा विवादहरु झन् बढेर गएका छन् । उनीहरु अब एक ठाउँमा रहने हुन् कि फुट्ने हुन् भन्ने खतरा पैदा भइराखेको छ ।
त्यसकारण सिद्धान्त र राजनीतिकमा एकता नभैकन पार्टी एकता गर्नु राम्रो हुँदैन । उदाहरणको लागि, पहिला नारायणकाजीहरुसँग चार बर्ष कुरा भयो । राजनीति मिलाएर अघि जाँऔँ भन्ने कुरा भयो। महाधिवेशनमा गएर मिलाऔंला भन्ने भयो र तद्अनुसार एकता गरियो । तर त्यो एकता टिक्न सकेन । पछि उनीहरु माओवादी तिर गए । र हाम्रो उनीहरुसँगको एकता टुट्यो । त्यसकारण सिद्धान्त र राजनीतिक समझदारी नभई गरिएको पार्टी एकता दिगो हुँदैन । बारम्बार व्यबहारले त्यो देखाएको छ ।
यसको अर्थ निकट भविष्यमा तत्कालै कुनै पार्टीसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना छैन ?
राजनीतिक रुपमा हाम्रो पार्टी एकता हुन सक्ने विप्लवजीहरुसँग हो तर उँहाहरुले पक्रेको बाटो र कार्यशैलीसँग हामी सहमत छैनौं । त्यसैले उहाँहरुसँगको पार्टी एकताकोसम्भावना टरेर गएको छ ।
मोहन वैद्यजीहरुसँग पनि कैयन राजनीतिक सवालहरुमा हाम्रो मतभेद छ । जस्तो कि, अहिलेको संविधानलाई हेर्ने कुरामै हाम्रो भिन्नता छ । संविधानका कैयन कुराहरुमा संघीयता कै कुरामा पनि हाम्रो विरोध छ । यो लामो समयदेखि नेपालमा चल्दै आएको राजनीतिक आन्दोलनहरुको उपलब्धि हो र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई कायम राख्नुपर्छ र बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसको ठीक विपरीत वैद्यजीहरु यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । अहिलेको गणतन्त्र बुर्जुवा किसिमकै हो तर पनि यसको महत्व छ र तत्कालका लागि यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौं । वैद्यजीहरु यो प्रतिक्रियावादी हो र यसलाई समाप्त नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ । जातीय प्रश्नमा पनि उहाँहरु र हामीबीच मतभेद छ । जातिय प्रश्न सही होइन भन्ने हाम्रो धारणा रहीआएको छ भने उहाँहरु जातीय प्रश्नमै बढी जोड दिनुहुन्छ । संघीयतालाई हामी विरोध गर्छौं, उहाँहरु समर्थन गर्नुहुन्छ । यी लगायतका राजनीतिक दृष्टिकोणमै रहेको भिन्नताका कारण तत्काल उहाँहरुसँग एकता हुने सम्भावना छैन ।
तर भनिन्छ, राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । कुनै बेला एक अर्काका कट्रविरोधी देखिनुहुने र राजनीतिक सिद्धान्तमै पनि पूरै भिन्नता रहेको ओली प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीहरुबीच एकता भयो । के त्यस्तो हुन सक्दैन र ?
पहिलो कुरा त तत्कालीन एमाले र माओवादी राजनीतिक आधारमा मिलेकै होइन, उनीहरु चुनावका लागि मात्र मिलेका हुन् । सत्ताका लागि उनीहरु मिलेका थिए, जसमा उनीहरु सफल पनि भए । त्यसलाई हामीले स्वागत पनि गर्यौं । तर राजनीति नमिलेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले तपाईंले देखिरहनुभएको छ ।
पार्टीमा काम गर्ने सिलसिलामा कसलाई कमिटीमा राख्ने भन्ने पार्टीका साथीहरुको निर्णय हो । आवश्यकताअनुसार, केन्द्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी वा कुनै पनि जिम्मेवारीमा राख्न सक्छन् । यो कुरा व्यक्तिको सक्रियता माथि वा पार्टीको विश्वास माथि, पार्टीप्रतिको आस्था माथि निर्भर हुने कुरा भयो । कोही जवरजस्ती नेतृत्वमा रहने कुरा हुँदैन ।
तपाई लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहनु भयो । तपाईको पार्टीमा नेतृत्व गर्ने अरु पात्र नभएर हो कि किन तपाईनै नेतृत्वमा रहिरहने ? छन् भने किन तपाई छाड्नु हुन्न नेतृत्व ?
कुनै पनि व्यक्ति पलाएन भएर वा निराश भएर वा अशक्त भएर पार्टीबाट हट्ने हो । केही गर्न सक्दिनँ भनेर पलायन हुँदा वा बिरामी भयो, उमेरले साथ दिएन वा काम गर्न सक्ने अवस्था रहने भने पार्टीबाट हट्ने हो । अन्यथा, कुनै पनि व्यक्ति पार्टीमा सक्रिय रहन्छ । कोही ५०–६० वर्ष वा म जस्तो ८५ बर्षसम्म त कोही ९० वर्षसम्म रहन सक्ला । हाम्रो सोचाइ जसले जति समयसम्म सक्रिय रुपमा काम गर्न सक्छ, त्यतिबेलासम्म पार्टीमा काम गर्नुपर्छ ।
तपाईले सक्रिय रहँदासम्म पार्टी नेतृत्वमा रहन सक्ने भन्नुभयो । तर नेकपा मसालको सिस्टमभित्र मोहनविक्रम सिंह मात्रै सदाबहार महामन्त्री बन्नुको कारण तपाईंको सट्टामा जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमतावान मान्छे नभएकै कारण तपाईलाई नै महामन्त्री चयन गरिबस्नुपर्ने बाध्यता हो ?
पहिलो कुरा त सक्रिय हुँदासम्म पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । पार्टीको निर्णयको प्रक्रिया हुन्छ । पार्टीले जसलाई उपयुक्त ठान्छ, उसलाई नै नेतृत्वमा छानेर जिम्मेवारी दिन्छन् । यो पार्टीले कसलाई विश्वास गर्छ भन्ने कुरा हो ।
यसको अर्थ पार्टीभित्र महामन्त्री बन्नको लागि तपाईंभन्दा योग्य र क्षमतावान मानिस छैन भन्ने हो ?
हैन, मुख्य कुरा पार्टीले कसलाई विश्वास गर्छ भन्ने कुरामा यो आधारित रहन्छ । जस्तो, स्टालिन, माओ, होचिमिन्ह लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्वमा रहे । यसको अर्थ पार्टीले जसमाथि सबैभन्दा बढी विश्वास गर्छ, उसैलाइ नेतृत्वमा राख्न सक्छ । आज मलाई विश्वास गरेर नेतृत्वमा राख्न सक्छ, भोलि विश्वास गरेन भने बहुमतले हटाएर केन्द्रीय कमिटिमा वा सल्लाहकारमा बस्नु भन्न सक्छ । जिल्ला कमिटीमा बस्नु भन्न सक्छ । यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । पार्टीले विश्वास गर्ने कुरा हो । पार्टीमा एउटा जनवादी प्रक्रिया हुन्छ, त्यसअनुसार नेतृत्व छान्ने कुरा हो ।
यसको अर्थ, कदाचित तपाईंले म पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहन्छु तर नेतृत्वबाट विश्राम लिन्छु भन्नुभयो भने तपाईको पार्टीमा महामन्त्री पद सम्हाल्न सक्ने थुप्रै योग्य नेतृत्व तयार छ ?
त्यस्ता कैयौँ योग्य साथीहरु हुनुहुन्छ । पार्टीमा महामन्त्रीको लागि ममात्रै योग्य भन्ने होइन । मानिलिनुहोस्, भोलि मेरो निधन नै होला, त्यो अवस्थामा योग्य नेतृत्व नभएर महामन्त्रीको पद खाली नै हुन्छ भन्ने होइन ।
त्यसो त मसालभित्र परिवारवाद हावी छ भन्ने कुरा पनि उठ्ने गर्छ नि !
जहाँसम्म परिवारवादको कुरा छ, परिवारवाद भनेको के हो त्यसमा हामी स्पष्ट छाँै । हाम्रो सिद्धान्त के हो भने पार्टीका नेताहरुले आफ्नो परिवारलाई पनि बढीभन्दा बढी पार्टीमा सक्रिय पार्नुपर्छ भन्ने छ । जस्तो मैले पार्टीमा काम गरे मेरा नाता पर्ने कोहीले पार्टीमा काम नगरुन, मेरा छोराछोरी पत्नी कसैले काम नगरुन भन्ने सोचलाई हामी सहि मान्दैनौँ । हामीले बढी भन्दा बढी परिवारका सदस्यलाई पनि पार्टीमा सक्रिय बनाउने कोशिश गर्नुपर्छ । यो कुरा बेग्लै हो कि त्यो सबै सफल हुँदैन । कतिपय अवस्थामा मैले कोशिस गर्दा पनि मेरा छोराहरु, भाइ नातेदाहरु सबै पार्टीमा आउँदैनन्, उनीहरु आ–आफ्नो पेशा नोकरीमा लाग्छन् । कोही कोही मात्रै आउँछन,् र पार्टीमा सक्रियतापर्वक काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु पार्टीका विभिन्न कमिटी वा पदमा हुन सक्छन् । यसअर्थमा त्यसलाई हामी परिवारवाद भन्दैनौँ । परिवारवाद भनेको कसैले काम नगरिकन, कुनै जिम्मेवारी नभइकन, उसको निश्चित पृष्ठभूमि नभइकन जबरस्ती नातेदार भएकै कारण पदमा राखिन्छ भने त्यो परिवारवाद हो । कुनै मान्छे पार्टीमा काम गर्छन् आफ्नै हैसियतमा काम गर्दै जान्छन् र पदमा रहन्छन् भने त्यो परिवारवाद होइन ।
तर तपाईंकी श्रीमतीलाई सांसद बनाउन लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई पाखा गरियो भन्ने आरोप त जबरजस्त रुपमा उठ्ने गरेको छ नि ?
कुरा त्यस्तो होइन । प्रथमतः दुर्गा पौडेलले मसँग विवाह गर्नुभन्दा १४ वर्ष पहिलादेखि सक्रिय भएर पार्टीमा काम गर्दै आएकी हुन् । उनको ३५ वर्षको राजनीतिक इतिहास छ । अहिले चुनाव जितिन्, बढी विवादको कुरा आयो । ०५२ सालमा कपिलवस्तुमा चुनाव लडेकी थिइन्, त्यतिबेला हारिन्, विवाद आएन । पछि काठमाडौँमा चुनाव लडिन्, विवाद आएन । कैयौं पटक महिला संघको अध्यक्ष भएर १० वर्ष जति काम गरिन्, त्यसमा विवाद आएन । अहिले चुनाव जितिन्, विवाद आयो । पहिला पनि उनी संसदमा हुँदा अरु २।३ जना साथीहरु हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ विवाद भएन । अहिले अरुतिरबाट जित्ने संभावना भएन, एक ठाउँबाट जित्ने संभावना भयो । पार्टीका उपाध्यक्ष क. चित्रबहादुर केसीलाई बागलुङ्बाट उठाउन हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ तर उँहा मान्नु भएन । त्यस्तो अवस्थामा प्यूठानबाट हामीले दुर्गा पौडेललाई उठाउनु पर्यो । प्यूठानको कमिटीले निर्णय गरेर उनको नाम पठायो र चुनाव लडिन् ।
तपाईहरु सरकारमा जानका लागि भित्र भित्र वार्ताहरु पनि भएका छन् भन्ने सुनिन्छन् । खास गरी, दुर्गाजीलाई मन्त्री बनाउने अफर नै आएको पनि चर्चा चल्ने गर्छ । सरकारमा जानेबारे तपाईहरुले धारणा के हो ?
हो, हामी सरकारमा जाने तयारी गर्दैछौं भनेर चर्चा परिचर्चाहरु हुने गरेका छन् । विशेषतः मैले दुर्गालाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डलाई भेटे, ओलीलाई भेटे भन्ने कुरा धेरै मिडियामा पनि आएका छन् । वास्तवमा त्यसबारे कसैसँग पनि कुरा भएको छैन । केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारमा जाने निर्णय गरेका थियौँ र सरकारमा गएका थियौँ । त्यसबेला राष्ट्रियता र जनतन्त्रको पक्षमा देखाएको अडान र गरेका काम, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयत्न गरेको हुनाले, भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध स्पष्ट नीति अपनाएको हुनाले त्यसलाई मद्दत गर्नको निम्ति सरकारमा जाने नीति अपनायौँ । पछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो । उनीहरुले पनि कोसिश गरेका थिए, हामीलाई सरकारमा सामेल गराउन तर हामी गएनौँ । अहिले पनि सरकारमा जाने हाम्रो नीति खुला छ । तर अहिलेको जुन प्रकारको स्थिति छ र सरकारले जुन प्रकारको नीति अपनाइराखेको छ, त्यो स्थितिमा हामी सरकारमा जाने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।
सरकारमा जाने नीति छ तर अहिले नजाने भन्ने तपाईंको भनाइ रह्यो । बोलाइहाल्यो भने चाहिँ जानुहुन्छ ?
बोलाइहाल्यो भने जाने भन्ने होइन । त्यसलाई त्यस ढंगले बुझ्नु गल्ती हुन्छ । उदाहरणको लागि, कांग्रेससँग आवश्यकताअनुसार कार्यगत एकता गर्न सक्ने हाम्रो नीति छ । तर यसको अर्थ सधैं त्यो गर्न सकिन्छ वा गर्ने हो भन्ने होइन । त्यसै गरी, वैद्यजीहरुसँग पनि कार्यगत एकता गरेर जाने हाम्रो नीति छ । त्यो परिस्थिति तयार भयो भने त्यो पनि गरेर जाने हो । यसर्थ, सरकारमा जाने नीति छ भन्नुको अर्थ बोलाउँदैमा गइहाल्ने भन्ने होइन । अहिले ओली सरकारले जुन खालको नीति लिइरहेको छ, त्यो समग्र स्थितिको विश्लेषण गर्दा यो सरकारमा जाने भन्ने कुरा नै हुँदैन ।
सरकारमा जाने विषयमा एक पटक पनि ओली, प्रचण्ड वा कुनै पनि पक्षसँग भेटघाट कुराकानी भएको छैन ।
एक डेढ महिना अघि प्रचण्डले मसँग भिन्न कुरा चाहिँ गर्नु भएको थियो । उहाँको प्रस्ताव, संभव छ भने हामीले वामदेवजीको लागि प्यूठानको सिट खाली गर्दिने र बदलामा राष्ट्रिय सभामा दुर्गाजीलाई लैजाने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । हामीले त्यो संभव छैन भन्यौं । पहिलो कुरा त सरकारमा जाने नीति खुला भएपनि यो सरकारले जुन प्रकारको नीति अपनाएको छ, त्यो स्थितिमा यो सरकारमा जाने प्रश्नै उठ्दैन । त्यसैले तत्काल संसदबाट जाने भन्ने हाम्रो निर्णय छैन भनेर हामीले सिधै त्यो कुरालाई अस्वीकार गरिदियौं ।
(सिंहसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता सोमबार प्रकाशित गरिनेछ । –रातोपाटी)